Inganekwane ka-Axlin: enye indaba emnandi kaLaura Gallego | Izincwadi Zamanje
UJuan Ortiz | | Fantasy, Izincwadi Zentsha, I-Novela
Umusho kaLaura Gallego.
Isidlozane sika-Axlin kuwumsebenzi wezincwadi ezinhle kakhulu zombhali ovelele waseValencia uLaura Gallego. Yashicilelwa ngo-Ephreli 2018 futhi ibekwe endaweni ecekelwe phansi izilo ezinonya. Yinoveli yokuqala ye-trilogy GAma-Uardians eCitadel; bayahambisana: Imfihlo kaXein (2018) kanye nomsebenzi kaRox (2019).
Ngenxa yemizamo yakhe, uLaura Gallego usephenduke ibhentshi ohlotsheni lwefantasy, okwenza kube nombono ojulile kubabukeli abasha. Indaba Izinkumbulo zika-Idhun ingenye yezincwadi zakhe ezifinyelela kude, okudayiswe amakhophi angaphezu kwesigidi esisodwa. Eumbuki zindwendwe ngu Axlin lalimelela ukubuya kokunqoba kowesifazane waseValencia; ukulandisa kwamukelwe kahle kangangokuthi kwaklonyeliswa ngo-2019 ngumagazini Ithempeli leminyango eyinkulungwane njengeNoveli Enhle Kazwelonke eyingxenye yeSaga.
1 Isifinyezo se-Axlin's Bestiary
1.1 Izwe elihlukile
1.2 Owesifazane osemusha okhethekile
1.3 Uhlobo olusha
1.4 Bhukha mayelana nezilo
1.6 Idolobha eliyingqayizivele
4 Mayelana nombhali, uLaura Gallego
4.1 Ukuzalwa kanye nendlela yokuqala yezinhlamvu
4.2 Izifundo zasenyuvesi kanye nokushicilelwa kokuqala
4.4 Umsebenzi onokukhuphuka okungenakuvinjwa
4.5 Eminye imiklomelo ebalulekile ayitholile
4.7.1 Izincwadi ngazinye
Isifinyezo se- Isidlozane sika-Axlin
Izakhamuzi zendawo enkulu zihlaselwa nsuku zonke izilo ezesabekayo. Lezi zidalwa ezimbi zizinikele ekubulaleni nasekudleni abantu ngaphandle kozwelo, zihlwanyela ukwesaba nomaphi lapho zidlula khona. Abantu—abayekethisa ngenxa yezimo ezazibathinta—bahlala bengabodwa, benesimiso esilula esigxile ekuphileni isikhathi eside ngangokunokwenzeka.
Owesifazane osemusha okhethekile
Axlin Kuyinto a Ikakhulu intombazane encane ehlala endaweni encane ebhaxabulwe yizinhlobo ezine zezilo. Lapho esemncane, washaywa yisifanekiso esaziwa ngokuthi "i-knotty." Naphezu kokusinda ekuhlaselweni, iqakala lakho walimala futhi ngenxa yalokho wayeyisinyonga. Ukukhubazeka kwakhe akumvumeli ukuthi anyakaze ngobunono noma agijime lapho ebhekene nokuhlasela.
Ngoba akakwazi ukuzivikela ngokulangazela, U-Axlin ufuna ezinye izindlela zokusiza abantu bakubo. Kufana nosuku olulodwa unobhala wendawo ucela ukumfundisa ukufunda nokubhala, ezoshintshwa esikhathini esizayo. Nakuba lawa kungamakhono abaluleke kakhulu, akekho owayenesithakazelo sokuwafunda, wawathatha kancane; Noma kunjalo, yavuma intokazi. Eminyakeni eminingi kamuva, lapho le ndoda ifa, u-Axlin waba umbhali omusha we-enclave.
Bhukha mayelana nezilo
Kancane ikhono lakhe lakhula, kanjalo nelukuluku lakhe lokwazi okwengeziwe ngezilo. Njalo lapho iqembu libuya ohambweni, wayelibuza mayelana nokuhlangenwe nakho kwalo nezici zezidalwa ezinonya. Lonke ulwazi lwalotshwa encwadini, ukuze kwenziwe umhlahlandlela ukuze izizukulwane ezilandelayo zikwazi ukuzivikela kubo.
Intshisekelo yakhe ikhula kakhulu lapho ebona ukuthi kukhona ezinye izinhlobo zezilo, ngakho wenza isinqumo esibalulekile. U-Axlin unquma ukuthatha uhambo olude ukuze aphenye futhi athole idatha kokuhlangenwe nakho kwakhe. Yile ndlela intombazane encane eqala ngayo i-adventure lapho izothola khona ama-specimens ayingozi kakhulu. Lokhu kwenza imibhalo yakho ibaluleke nakakhulu, ibe isilwane esiphelele.
Emgwaqeni, Axlin sizohlangana abalingiswa abasha abazonquma empilweni yakhe, njenge Xein. Futhi uzothola ukuthi kunomuzi ongenazo izilo ebizwa ngeCitadel, ngakho igxile ekufikeni lapho. Ukwenza lo msebenzi omusha kuyamjabulisa kakhulu, futhi ngokucabanga ukuthi uzokwazi ukuthi ubani ngempela ongasohlangothini lwakhe. Kodwa-ke, lapho ufika "endaweni ekhishiwe" uzobona ukuthi bekungeyona into obuyilindele.
Lena indawo ka-Axlin una inganekwane yamaphupho yohlobo lwengane/yentsha enezahluko ezingama-37 ezembuleka emakhasini angaphezudlwana kuka-500. Ihlelwe emhlabeni ohlukunyezwe izilo futhi ihlukaniswe ngama-enclaves. Umlando Ilandiswa ngomuntu wesithathu ngabalingiswa abahlukahlukene; inomugqa wendaba owuketshezi kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni.
Ungumlingiswa oyinhloko wenoveli. Indaba iqala njengentombazane futhi ekukhuleni kwayo kulo lonke uhlelo ungabona ukuthi ivuthwa kanjani esivivinyweni ngasinye asiphumelelayo. Izinqumo zakhe ezihlakaniphile zimholela ekubeni onesibindi intombi egcina ingunobhala wendawo yakubo, ngenxa yalokho anquma ukwenza umsebenzi onzima nobalulekile ovuna ezinye izakhamuzi: ukuchaza kabanzi ngesilwane.
Ungomunye umlingiswa wendaba umbhali anikela kuye izahluko ezimbalwa. Uyinsizwa ehlala nonina kwenye yezindawo ezivalelwe, bobabili bodwa kuze kufike u-Axlin. Impilo yakhe ithatha ushintsho olukhulu ekubeni ngumfana onesizungu ukuze abe yisifiso seqembu elibizwa ngokuthi "Abaqaphi."
Mayelana nombhali, uLaura Gallego
Ukuzalwa kanye nendlela yokuqala yezinhlamvu
ULaura Gallego García wazalwa ngoLwesibili, ngo-Okthoba 11, 1977 kumasipala waseValencian weQuart de Poblet eSpain. Kusukela esemncane ubezifela ngezincwadi, ubufakazi balokhu ukuthi Lapho eneminyaka engu-11, kanye nomngane wakhe, waqala ukubhala incwadi emnandi. Kwathatha iminyaka emithathu ukuwenza, futhi yagcina iyindatshana enamakhasi acishe abe ngu-300 ebizwa I-Zodiacía, umhlaba ohlukile, kodwa abazange bakumemezele.
Izifundo zasenyuvesi kanye nokushicilelwa kokuqala
Ngemva kokuphothula izifundo zesekondari, wabhalisa eNyuvesi yaseValencia, emsebenzini we-Hispanic Philology. Ngaleso sikhathi, ULaura wayesebhale izincwadi ezingu-13, zonke zazithunyelwe kubashicileli nemincintiswano, kodwa akazange akwazi ukuzishicilela. Kwaze kwafika unombolo 14, UFinis Mundi (1999), umsebenzi umbhali awine ngawo indondo ye-Barco de Vapor evela ku-Editorial SM.
UGallego waqhubeka nokubhala engayeki, umsebenzi wakhe olandelayo kwakuyi-tetralogy IziKronike Zombhoshongo (2000). Uphinde washicilela imisebenzi ngayinye, njenge Buyela e-White Island (2001) kanye ne-The Daughters of Tara (2002). Ngo-2003 uphinde waklonyeliswa ngendondo yonyaka evela ku-Editorial SM, nge La inganekwane yenkosi ezulazulayo. Le mpumelelo ilandelwe eminye imisebenzi efana nale: Umqoqi wamawashi angavamile (2004).
Umsebenzi onokukhuphuka okungenakuvinjwa
Kusukela lapho, Umsebenzi wokubhala ubulokhu udlondlobala, ngokwethulwa kwezincwadi ezimbalwa ezizimele kanye namasaga amahlanu. Phakathi kokugcina singabala ama-trilogies Izinkumbulo zika-Idhun (2004) futhi Abaqaphi beCitadel (2018). Ngokunjalo, uGallego wangena ohlotsheni lwamaqiniso ezincwadi ngochungechunge Sara y abashaya amagoli, equkethe izincwadi eziyisi-6.
Kungumsebenzi wakhe omkhulu wokubhala, i-Valencian ishicilele amanoveli angaphezu kwamashumi amane - inganekwane, ikakhulukazi - futhi isihunyushelwe ezilimini ezimbalwa.
Eminye imiklomelo ebalulekile ayitholile
I-Cervantes Chico ye-Youth Literature (2011)
Imibhalo Kazwelonke Yezingane kanye Nentsha ngo-2012 ngu Lapho izihlahla zicula khona (2011)
Imaginamalaga 2013 by Incwadi Yezingosi (2013).
Ingcaphuno kaLaura Gallegog
Buyela e-White Island (2001)
I-Dream Postman (2001)
Amadodakazi kaTara (2002)
Inganekwane Yenkosi Ezulazulayo (2003)
Isipoki esosizini (2004)
Ndodakazi yasebusuku (2004)
Umqoqi wamawashi angavamile (2004)
U-Alba unomngane okhethekile (2005)
Umbusi we-ethereal (2007)
Amakhandlela amabili kasathane (2008)
Lapho izihlahla zicula khona (2011)
Incwadi yezingosi (2013)
I-Encyclopedia ye-Idhún (2014)
Zonke izinganekwane zombuso (2015)
Lapho ungibona (2017)
Okwe rose (2017)
Konke ongaphupha ngakho (2018)
Umjikelezo wombusi waphakade (2021)
Isigodi Sezimpisi (2000)
Ucingo lwabafileyo (2002)
USara And The Goleadoras:
Idala ithimba (2009)
Amantombazane angamaqhawe (2009)
Abashaye amagoli aphezulu kuligi (2009)
Ibhola likanobhutshuzwayo nothando akuhambisani (2010)
Abashayi amagoli abayeki (2010)
Igoli lokugcina (2010)
Umlingo ngenhlanhla (2012)
Amaqhawe ngenhlanhla (2016)
Isidlozane sika-Axlin (2018)
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » Isidlozane sika-Axlin
Novemba. Ukukhethwa kwezinto ezintsha